Madaxweyne: Imisa Jeer Ayey Madaxtooyadu Tusaale Noqotay?By: Cumar Maxamed Faarax | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweyne: Imisa Jeer Ayey Madaxtooyadu Tusaale Noqotay?By: Cumar Maxamed Faarax
Published on February 7, 2018 by sdwo · No Comments
54kii maalmood ee ay jirtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, xarunta Madaxtooyada Somaliland ayaa noqotay hay’adda lagu baalaleeyo [bilaabo] hawl kasta oo dawladdu fulinayso, taas oo ah bisayl hoggaamineed iyo ifafaale loogu sii dhawaanayo inaynu yeelano maamul dawliya oo bartilmaameedkiisu yahay in loo dhaqaaqo maamul wanaagga loo jeellan yahay.
Madaxweyne Muuse Biixi wuxuu maalintii uu daah-furayey mashruucan uu ka hadlay ujeeddooyinka looga gol-leeyahay tiro-koobka madax-taabashada ah. waxaanu qiray in mushaharka hawl-wadeennada dawladdu uu aad u hooseeyo; “Waxa soo noqnoqday in dawladdu mushahar badan bixiso oo in badan oo mushaharkaas kamid ah ay qaataan dad aan shaqaynin, amaba dad aan jirin, taas weynu hubinaynaynaa, midna weynu ognahay oo dadka mushaharka la siiyaa wuu yar yahay oo kuma filna.”
Haddii ay jiraan dad u qaatay in tiro-koobkan culus shaqada lagaga saarayo hawl-wadeenno badan oo u soo dhabar adaygay daryeelka hooseeya ee shaqaalaha dawladda, waxa arrintaas ka shaafiyey madaxweynaha Somaliland oo ay tahay inaynu iimaansano qowlkiisa; “Waa in shaqada loo sinnaado oo uu qof kastaa ku soo galo aqoontiisii, maantana tani waa bilow, shaqaalahana lama eryayo lamana riix-riixayee waxa la hubsanayaa imisaa inoo shaqeeya, imisaase inaga dhiman,”ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi.
Geesta kalena waxa xukuumaddu 4tii bishan Feberwari ay shaacisay inay muddo 28 maalmood ah ku fulinayso tiro-koob kale oo ay ku diiwaan-gelinayso tirada gaadiidka dawladda (GT), oo madaxweyne ku-xigeenku ku dhawaaqay furitaankiisa, waxaa lagu xaqiijin doonaa tayada gaadiidka, inta shaqaynaysa, inta fadhida ee la kicin karo iyo inta duugowday in xaraash loo tartamo lagu faasaxo.
Sidoo kale, waxa barnaamijkani xukuumadda wax ka tarayaa inay ka baaqsato in dhaqaale kaga baxo gaadiid cusub. Hawlgalkan diiwaangelinta gaadiidka isna waxa lagu bilaabay gaadiidka xarunta madaxtooyada. Kama tagayo inaan xuso 100 shaqaale ah oo aan joogto ahayn, hase ahaatee muddo kala duwan ka soo shaqeynayey madaxtooyada laga eryey maalmo kadib markii madaxweynuhu xilka la wareegay. Sidaas darteed, madaxtooyadu waxay ahayd halkii uu ka soo baxay warkii ugu horreeyay ee ku saabsan ‘shaqaale la caydhiyey.’
Madaxweynaha cusub waxa la weriyay inuu xafiiskiisa soo fadhiisto ka hor inta aanay shaqaalaha iyo masuuliyiinta kale ee madaxtooyadu ka soo xaadirin xafiisyadooda, taasi oo hortii ma dhacdo ahaan jirtay.
Kalahaada wuxuu madaxweynuhu ku ababiyey golihiisa wasiirrada oo xafiisyadooda laga helo saacadaha shaqada. waxaa xarumaha laamaha dawladda xiligan dambe lagu arkaa iyadoo la is farayo ama la iskula xisaabtamayo ilaalinta siddeeda saacadood ee shaqada. Sidaas darteed, waa in jidkaas cad ee madaxweynuhu cagta saaray aanay xukuumadiisu ka ilbixin isaguna aanu ka daalin muddo xileedkiisa oo dhan.
Oo Aan iiga sii darin”….